Kelvin-Helmholtz sgwé ojii | Netwọk Mgbasa Ozi
The ịmata Kelvin-Helmholtz n'ígwé ojii
Monica sanchez | | Igwe ojii
Nature na-achọkarị ịmata ihe. Ọ bụ ezie na ihe nkịtị ga-abụ ịhụ ebili mmiri n'oké osimiri, mgbe ụfọdụ na mbara igwe enwekwara ebili mmiri. Enweghi ike a bu aha nke Kelvin-Helmholtz urukpuru.
Ha dị obere, yabụ onye ọ bụla nwere ohere ịhụ ha kwesịrị ịma na ha dị obere. Yabụ ... nwee igwefoto gị dị njikere, ma ọ bụ akwụkwọ ndetu gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ide akwụkwọ akụkọ, ebe ọ bụ na igwe ojii ndị a pụrụ iche nwere ike ịbụ magburu onwe isi iyi nke mmụọ nsọ, dị ka ha bụ maka onye na-ese ihe Vincent Van Gogh.
Onye choputara ha ma kedu ka esi hibe ha?
Onye mbu bu Baron Kelvin choputara igwe ojii Kelvin-Helmholtz, na onye dibia bekee Hermann von Helmholtz. Ha dị ka ebili mmiri na-agbasa oké osimiri, nri? Ọfọn, ha na-etolite n'ụzọ yiri nke ahụ. Mgbe akwa dị n’okpuru batara ma ọ bụ nwee nwayọ nwayọ karịa nke dị n’elu, ọrụ ebube ndị a dị n’eluigwe na-apụta.
Olee mgbe ha hụrụ ibe ha?
Ha na-etolite na ụbọchị ikuku dị oke ikuku, mgbe igwe ikuku nwere njupụta dị iche. A pụkwara ịhụ ha dịka ọmụmaatụ n'oge ebe okpomọkụ.
Dị ka n'elu, ya mere n'okpuru
Ma ọ bụ na ekele maka physics nke enweghị ike ịmata ihe, Satellites ihu igwe nwere ike ịlele ọsọ ọsọ n'elu oke osimiri. Ya mere, ha nwere ike ịmatakwu nke ọma ebili mmiri ga-eru n'oge oke mmiri ozuzo, dịka ọmụmaatụ.
Isi iyi nke mmụọ nsọ
Night Starry, nke Vincent Van Gogh dere
I chere na anyị na-egwu egwu? Ihe akaebe a gosiri na igwe ojii Kelvin-Helmholtz bụkwa isi iyi nke mmụọ nsọ. Ekwenyere na ha kpaliri onye na-ese ihe Vincent Van Gogh, ekele nke o ji kee otu n'ime ọrụ ya kacha mma: Abalị nke kpakpando jupụtara na ya.
Mana, na mgbakwunye, ha nwekwara ike gbaa gị ume dee akwụkwọ ọgụgụ. Ihe niile bụ ihe n’echiche.
You hụtụla igwe ojii ndị a? You maara ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » The ịmata Kelvin-Helmholtz n'ígwé ojii
Mụ anụmanụ ndị nọ n'ihe ize ndụ nke ikpochapụ n'ihi okpomoku ụwa